Matipi Evakuru: Matipi Ekudzivirira Kudonha Kwakashata
Kudonha kwakashata kunogona kuitika kune chero ani wedu chero nguva uye zvese zvinotora kusatsika zvishoma. Nekudaro pane mamwe matipi akareruka chero munhu aanogona kushandisa kudzivirira kuve nekukasira kurasira. Iwo matipi pazasi achakubatsira iwe kugara wakachengeteka uye kudzivirira kudonha.
Tanga nekuongorora mapfupa ako. Kune mishonga inogona kupihwa nachiremba wako inosimbisa mapfupa ako.
Kurovedza muviri Nguva Dzose Kudzivirira Kuwa
Kugara uchirovedza muviri kunowedzera simba rako, izvo zvinobatsira majoini, mitsipa, uye tendon kuti ive yakasimba. Kurema kutakura maekisesaizi sekufamba kunononoka kurasikirwa kwepfupa kunokonzerwa neosteoporosis zvinoreva kuti haufanire kushandisa nzimbe, Walker kana kunyange a wiricheya nokuti kufamba zvinangwa.
Ive nekuchenjerera kwazvo kana uchinwa sedoro rinokanganisa bharanzi yako nemafungiro.
Kana wanga wakagara kana kurara pasi, simuka zvishoma nezvishoma kuti usaone chiedza chakanangwa.
Chengetedza tembiricha ine mwero mumba mako sezvo tembiricha yakanyanyisa inogona kukonzera dzungu.
Chengetai dzimba dzekugezera uye dzekukicheni dzisina mvura kana zvinwiwa kuti zvirege kutsvedza. Pfeka shangu dzine zvitsitsinho zvakaderera uye tsoka dzerabha.
Isa uye shandisa handrails pane stairways. Usamira pachigaro kuti usvike chero chinhu. Shandisa "svutugadzike" yekubata chishandiso chaunogona kuwana kubva kune akawanda mashopu ezvitoro.
Dzivirira kugumburwa nekuchengeta pasi paunofamba kazhinji pasina zvipingamupinyi.
Paunenge uchitakura mapakeji, ita shuwa kuti iwe unogona kuona uko yako inotevera nhanho ichamhara.
Isa mumabhawa ekubata mune mashawa, zvimbuzi uye machubhu. Isa asiri-skid mats, kapeti kana mitsetse pane iyo inogona kunyorova, kunyanya mashawa mashawa nemabhawa.
Kana tembiricha yekunze ikaenda ichirohwa nechando, ita shuwa yekupfeka bhutsu dzakanaka uye ita chokwadi chekushandisa handrails apo kushandisa masitepisi. Ramba uchifunga kuti iro dema chando rinogona kubuda panenge chero kupi.
Usashandise manera kunze kwekunge uine mumwe munhu wauinaye anogona kudzikamisa uye usazombozvitambanudzira. Rega zvayakanakira itarisire kuchenesa magata ako kana kugadzirisa yako denga.
Kuita Kuti Uve Wakachengeteka
Vazhinji vakwegura vanoda kuchengetedza rusununguko rwavo nekuenderera mberi nekugadzirisa dzimba, asi zvinogara zvakanaka kurega izvo zvakanak zvichikuitira iwo mabasa. Iwe unogona achiri kugadzirisa zvidiki chero iwe usiri mune wiricheya, saka usarwadziswe nekuzvinyanyisa iwe pachako.
Kuwa kunogona kuve nenjodzi uye kunogona kudzikisira yako unhu yehupenyu kana iwe ukakuvara, kunyanya kana iwe ukasvikira mune wiricheya kana kushandisa a Walker kana tsvimbo nokusingagumi.